Iindlela ezi-5 zokwenza ikhephu elenziweyo elenziweyo- Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Uyenza njani ikhephu elingelolamvelo
Uyenza njani ikhephu elingelolamvelo
Kudala ndifuna ukuzama yenza ikhephu lokuzenzela. Obu bubugcisa obuza kusinceda sihombise imeko yethu yokuzalwa ngeKrisimesi okanye ukuba senza imodeli nabantwana kwaye sifuna ukuyinika into eyinyani nekhephu. Okanye ukuze bangcolise izandla zabo kwaye badubule.
Ndizamile iindlela ezi-5 ezahlukeneyo zokuba nekhephu elenziweyo, ndiyazibonisa kwaye ndizithelekise kulo lonke inqaku. I-Intanethi igcwele iitutorials zokwenza ikhephu kunye namanabukeni kwaye ndiyifumana iyinto eyintlekele kwaye ingafanelanga abantwana.
Emva komzamo wokuqala wokukhathazeka ndawathanda amava amancinci kangangokuba ndakhangela enye indlela yokwenza ikhephu elenziweyo elenzelwe ekhaya, ngendlela ekhuselekileyo nenomtsalane ongayenza ngokulula nabantwana bakho. Apha ngezantsi unayo yonke.
Ukuba ufuna iimveliso zentengiso zifumane ikhephu elingelolakho, ikhephu elingelolakho okanye ikhephu elikhawulezileyo, sicebisa ezi.
Sepkina (Ikhephu elingelolakho elinomtsalane)
Ezi zizithako esiza kuzisebenzisa kuzo zonke iiresiphi.
Ukutsheva amagwebu (€ 0,9)
Isodium bicarbonate (€ 0,8)
Umbona wamanqatha (€ 2,2)
I-Conditioner (esinayo ekhaya, isetyenziswa kancinci)
I-diaper kunye / okanye i-sodium polyacrylate
Ndishiya ividiyo endiyenzileyo ndenza iintlobo ezahlukeneyo zekhephu ukuze inkqubo ibonakale ngokucacileyo. Indlela ye-diaper endiyigcinileyo okokugqibela. Ndinezinye iividiyo ezimbalwa ezilungele ukuba ndiza kuthumela ngokuzimeleyo kwiibhloko zebhlog. Ke ndiyakushiya eli khonkco lokuba ubhalisele ijelo le-Youtube
Indlela yoku-1- kunye ne-diaper
Ithiyori ilula kakhulu, siyibonile kwaye sayifunda kumakhulu okanye kumawakawaka eziza ze-Intanethi. Sithatha amanabukeni aliqela, siyawavula kwaye sikhuphe umqhaphu onxibe ukufunxa ipee. Oku kuxutywe ne-sodium polyacrylate.
IPolyacrylate yipolymer enokufunxa ukuya kuthi ga kumthamo wama-500 umthamo wayo kwaye xa ithe yabamba amanzi iyafana kakhulu nekhephu.
Kodwa lo mgaqo ulula xa uziqhelanisa ndifumene iingxaki, andiboni mntu uphawula ngazo. Mhlawumbi ndim onelishwa.
I-Polyacrylate ixutywe nefayibha yomqhaphu kwaye ukwahlulahlula kube nzima kum. Ndizamile amanabukeni amabini, enye yeyabantu abadala ukuba babe nakho ukubaninzi kwaye enye yeentsana kwaye kwenzeka into efanayo kum, nokuba ndingayigcoba kangakanani na ifayibha yomqhaphu, phantse akukho kuwa kwepolymer kodwa ilifu leefom fluff ezikungqongileyo edadayo emoyeni, eyenziwe yifayibha yomqhaphu kwaye ndiyaqikelela ukuba yipolymer. Kwaye inyani andiyithandi ukuba ndiyiginye, ndingacingi ukuba iintombi zam ziphefumla oko.
Ke ndiyilahlile le ndlela de ndifumane indlela esebenzayo nekhuselekileyo yokususa i-polyacrylate. Okwangoku, ukuba ufuna ukuzama le recipe, bayayithengisa kwiindawo ezininzi.
Kwakhona sinokuthenga i-sodium polyacrylate ngolu hlobo.
Iindlela endizibona zilungele abantwana kwaye bendizakubeka ntoni amalinge abantwana Zizo zilandelayo:
Indlela 2 - Cornstarch kunye foam
Masiqale nge I-cornstarch kunye ne-shaving foam recipe.
IMaizena ngumgubo ocoliweyo wombona, ndithenga olu hlobo lophawu kodwa ungathenga enye, umahluko ngomgubo oqhelekileyo ngowokuba uphucukile kakhulu, ususwe ngakumbi.
Asiniki naliphi na inani ngqo lomxube. Apha siza kongeza ingqolowa yegwebu kunye ne-foam kwaye sixubeke de sifezekise ubume obufunekayo kwikhephu.
Ikhephu elenziwe ngestarch corn kunye ne-foam linendawo ethambileyo ethambileyo abantwana bathanda ukuyithanda kakhulu. Inombala otyheli ngoko ayiniki mvakalelo yokwenene yekhephu, njengoko kusenzeka kwimixube ene-bicarbonate.
Ezinye izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo lixabiso lalo mgubo, ongaphezulu kwe- € 2 kwaye ukuba sifuna ukwenza ubungakanani iya kubiza kakhulu kune-bicarbonate. Chaza nebala. Ayisibaxi konke konke, kwaye ihamba ngokulula, kodwa ibeka amabala naphina apho uchukumisa khona.
Indlela yesi-3-ngesoda yokubhaka kunye ne-shaving foam
Iresiphi elandelayo inayo isoda yokubhaka kunye nokucheba amagwebu. Njengoko ubona, ukucheba amagwebu kusetyenziswa ngokubanzi kuvavanyo lwasekhaya, ukusuka kwezi ntlobo zekhephu ukuya kwiindidi ezahlukeneyo zesilayidi.
Xa uthenga ibicarbonate yesoda, ndicebisa ukuba uthathe ezi bhegi zeekhilogram, ezingabizi kakhulu, indibize iicenti ezingama-80 okanye ezingama-90. Ukuba sithatha iitoti zeplastiki kukho ubuncinci obuninzi kwaye kufanelekile ukuba zibize kakhulu.
Indlela yokusebenza iyafana naleyo yeCornstarch, sidibanisa i-bicarbonate, igwebu kwaye siyayixuba kwaye siyigqibe naleyo siyifunayo. Ukuba sineqhuma sibeka i-bicarbonate engaphezulu ukuba ithambe kakhulu ukuba xa idityaniswa ayigcini imilo kuba sibeka amagwebu amaninzi. Kwaye ke de sifumane ukuthungwa okufunwayo.
Ngokungafaniyo nekhephu elidlulileyo, eli licocekile ngombala omhlophe, kwaye libonakala ngokubonakalayo njengekhephu lokwenyani.
Indlela 4 - ukubhaka isoda kunye namanzi
Kwaye siya kwelinye kuye kwaba yindlela yam endiyithandayo, yokwenza ikhephu lokuzenzela ndisebenzisa isoda yokubhaka kunye namanzi.
Kwaye kunjalo, nangona kubonakala ngathi kuyaxoka, ikhephu elibunjiweyo ngale ndlela lifana kakhulu nelogwebu kunye nelo cosi esiya kuthi silibone ekugqibeleni. Kakhulu kangangokuba andizange ndiphawule iipleyiti apho ikhephu laligcinwa khona; Iintombi zam bezidlala emva koko ndingazi ukuba yeyiphi. Ndandinokuchonga kuphela enye eneMaizena ngokukhawuleza ngombala.
Ndandinomdla kakhulu wokuba ndibachonge kuba ndandifuna ukubona ukuba nganye yavela njani ngokuhamba kwexesha kwaye ekugqibeleni ndandingenandlela yimbi ngaphandle kokuba ndizame, kuba nokuba ndibachukumise kangakanani, andinakho ukwahlula kubo. Ukuchukumisa kwahluke kancinane kwilinye nelinye, kodwa akukho nto ikwenza ukuba uthi le ithambile kwaye igwebu, umzekelo.
Kwaye ndisebenzisa eli thuba ukukhumbula ukuba ngqongqo ngakumbi kuvavanyo lwexesha elizayo kwaye ndibhale izinto phantsi, ndibachonge kakuhle kwaye babhale phantsi yonke into kwincwadana yokubhalela ukuze bangalahli idatha ngokuhamba kwexesha okanye nakuphi na ukongamela ngexesha lovavanyo.
Iresiphi yekhephu iyafana nayo yonke, amanzi e-bicarbonate kunye nomxube. Akunyanzelekanga ukuba ugalele amanzi amaninzi.
Ekuqaleni ndathi yeyona nto ndiyithandayo kuba Ukuba sifumana iziphumo ezifanayo, ndicinga ukuba eyona nto ilungileyo kukwenza elula. Kuyinyani ukuba abantwana bayayonwabela le nto incinci, kuba bayathanda ukungcolisa izandla zabo, kodwa olu lolona hlobo lutshiphu kuzo zonke.
Indlela yesi-5 - isixhobo sokulungisa kunye nesoda yokubhaka
Iresiphi yokugqibela ngaphambi kwaye uchaze indlela edumileyo yamanabukeni.
Kule meko siza kudibanisa imeko kunye nesoda yokubhaka. Yiyo, ndiyacinga, yeyona ndlela incangathi, kuba nangona igwebu linamathela kakhulu, ukuchukumisa kuyathandeka kwaye kwangoko kuxutywe kakuhle kwaye kuphume esandleni. Kodwa i-conditioner yenza ukuba izandla zakho zincangathe slimy, andiyithandi kakhulu, isono sidibanisa kakuhle kwaye sahlule ezandleni zakho, kodwa zihlala zinesepha.
Kuya kufuneka ubeke isixa esincinci, ndibeka kakhulu kwaye ndifumane ukuthungwa okuhle kufuneka ndibeke imeko eninzi.
Ikhephu libonakala linzima kunangaphambili, kodwa ke ekuqaleni, xa kudlula iiyure ezimbalwa zonke azibonakali.
Ukuthelekiswa kweentlobo zekhephu lokuzenzela
Apha sishiya i-diaper okanye i-sodium polyacrylate kuba andikwazi ukuyifumana. Andikathelekisi i-polyacrylate kwaye ndiyifake kuthelekiso.
Kwifoto zegalari kukho i-4 ikhephu elifunyenweyo. I-3 bicarbonate a priori ayinakucaciswa, kodwa jonga leya yeMaizena. Uyabona ukuba kuphuzi kangakanani?
Ukuphoxeka kwekhephu kuza emva kweeyure ezingama-24, umxube womile kwaye okushiyekileyo ngathi ngathi sinesitatshi sombona okanye ibicarbonate evulekileyo kwaye kuya kufuneka siphinde siwenze lo mxube okanye siwungenise ukuze uphinde uthathe ukungaguquguquki kwekhephu kwakhona. Kungenxa yeso sizathu le ndlela yamanzi ndiyithandayo.
Kule meko, i-sodium polyacrylate ibonakala ingcono kum, kuba ndiyaqonda ukuba ihlala ixesha elide. Ngokukhawuleza xa ndizama, ndiza kukuxelela ;-)
izigaba Iingcaphephe zaseKhaya, Amalinge abantwana Ukuhamba kwetikiti
Ukubuyisela incwadi yakudala
Ungayivula njani iselfowuni ngescreen esaphukileyo
Izimvo ezi-2 ku «Uyenza njani ikhephu elingelilo»
EtiMnga 21, 2018 ngexesha 9:39 pm
Enkosi. Ibelinqaku elinomdla kakhulu.
EtiMnga 22, 2018 ngexesha 11:42 am
Ndonwabile ukuba uyithandile :)
Kungekudala enye enesilayidi ;-)
1 Indlela yoku-1- kunye ne-diaper
2 Indlela 2 - Cornstarch kunye foam
3 Indlela yesi-3-ngesoda yokubhaka kunye ne-shaving foam
4 Indlela 4 - ukubhaka isoda kunye namanzi
5 Indlela yesi-5 - isixhobo sokulungisa kunye nesoda yokubhaka
6 Ukuthelekiswa kweentlobo zekhephu lokuzenzela